Zavatra azonao atao amin'ny labozia taloha! - Torohevitra Sy Hevi-Dehibe!
ny fomba fanamboarana tsaramaso maitso mangatsiaka
ny fomba fanaovana fikorontanana tsy misy blender
inona avy ny tadin'ny hen'omby henjana firenena
Zavatra azonao atao amin'ny labozia taloha!
Tiako? Kitiho mba hamonjy azy!
Araho Mandany vola amin'ny Pennies amin'ny Pinterest ho an'ny torohevitra, hevitra ary fomba fahandro bebe kokoa!
Avelao ny toro-hevitrao manokana amin'ny hevitra etsy ambany!
Manana labozia fofona mahafinaritra tianao ho may foana ianao, fa raha vao fohy loatra ny wick, na be loatra ny savoka raha tsy eo dia atsipinao ao anaty fako io. Andraso anefa! Tena mahasoa ny faran'ny labozia, koa aza ariana fotsiny izao!
Amboary ny zipper maditra: Manana zipper izay sarotra zipo? Amboary amin'ny labozia kely! Esory ny nub ny labozia mankamin'ny nify amin'ny lafiny roa amin'ny zipper raha misokatra izy, ary sokafy ary akatony ny zipper imbetsaka. Tokony hampilamina ny lalana hikatonan'ny zipper ary hisokatra milamina izy io!
Esory ny vatasarihana ataonao: Manana vatasarihana maditra sy miraikitra ao anaty fitafianao ve? Tsoahy hiala amin'ny sisiny ny vatasarihana ary avadiho izany. Alefaso eo ambonin'ilay lalamby ny vodin-labozia, ary averina eo amin'ny toerany ilay vatasarihana. Tokony ho mora kokoa ny hisokatra izao!
Arovy ny resinao: Nahazo sakafo tamin'ny karatra nahandro hafa ve ianao nandritra ny nandrahoanao sakafo? Gross! Tehirizo amin'ny karatra kely ny resanao, amin'ny fikosehana labozia fotsy eo ambonin'ny karatra iray manontolo. Hisorohana ny sakafo tsy miraikitra amin'ny tany izy io, ary hanamora ny famafazana sakafo kely mitete.
Manaova labozia vaovao: Raha manana fanangonana labozia fohy dia fohy ianao dia tsy afaka mandoro azy intsony, azonao atao ny mandraraka azy ireo mba hanamboarana labozia vaovao! Ataovy ao anaty a fotsiny ny labozinao boiler roa (jereo ny naoty etsy ambany) amin'ny hafanana antonony. Rehefa miempo ny savoka dia arotsaho ao anaty fitoeran-tsakafo iray ny karazana rehetra. Azonao atao ny mampiasa siny mason, mpikapa mofomamy (eo amin'ny taratasy taratasy), fitoeran-dabozia, kaopy sy izay rehetra mahazaka ny hafanana! Raha te-hanaova labozia mijoro maimaimpoana ianao dia makà kaopy voahidy savoka ary fenoy ilay savoka mafana. Rehefa avy mangatsiaka dia tokony ho azonao atao ny manala ny ampahany amin'ilay kaopy amin'ny labozia. Aza adino ny mampidina ny wick ao raha mbola mafana!
Labozia Citronella: Manamboara labozia miady amin'ny bibikely ataonao amin'ny alàlan'ny fandrendahana tendron'ny labozia ary ampio menaka citronella ho a boiler roa (jereo ny naoty etsy ambany) alohan'ny handraraka. Mora kokoa noho ny mividy vaovao isaky ny vanim-potoana!
Poloney ny kiraronao: Avy amin'ny mpamafa kiraro? Mampiasà labozia taloha! Esory fotsiny ny savoka labozia eo ambonin'ilay kiraro, toy ny ataonao amin'ny savony lamba sy kiraro. Ny firakotra tsara amin'ny savoka madio dia hiasa amin'ny fatorana, mandra-pivoakanao mankany amin'ny fivarotana!
Hamirapiratra ny labozinao taloha: Ity tendrony ity dia iray amin'ireo ankafiziko.Raha manana labozia taloha ianao izay nanangona vovoka ary tsy dia tsara tarehy intsony nefa mbola maimbo mahafinaritra dia azonao atao ny manao azy ho vaovao indray! Makà pantyhose efa tonta ary ampiasao hanazava ny labozinao… hitovy amin'ny vaovao ilay izy!
NAOTY: TSY MISY savoka mafana ao anaty lapoely mihitsy noho ny hafanana (gazy na elec) - ampiasao foana lapoaly broiler roa (lapoaly avo roa heny izay ametrahanao rano amin'ny lapoaly ambany sy ny savoka sns ao amin'ilay ambony - mampiasa etona avy amin'ny rano mafana mba hiempo). Raha misy hamandoana ao amin'ny savoka dia mety hipoaka izy ary na dia tsy misy aza izany - 'miboiboika' dia mety hitranga ary manaparitaka savoka mafana anao koa. (Misaotra Maria)
Mampiasa ny mpamaky:
Cathy T .: Napetrako teo amin'ny fatana nataoko ny masoko, avy eo rehefa eo ny lafaoro dia azoko ny fofona manitra avy amin'ilay savoka!
Suzanne T. : Fanombohana afo. Mametraha takelaka fanamainana fanamainana kely ao anaty lavaka tsirairay amin'ny baoritra atody taratasy, avelao hihidy ny zoro. Fenoy tsara amin'ny savoka labozia taloha ny lavaka tsirairay. Rehefa mafy dia esory ho baoritra 12 ho an'ny fatana fandoroana ny baoritra. Miaraka amin'ny baoritra & lint miaraka amin'ny hazavana… apetraho amin'ny am-patana alohan'ny handrehitra ny lint, mora mirehitra izy io.